बच्चाहरूको पुस्तकहरू यो क्रिसमस दिन। विशेष बच्चाहरू। | वर्तमान साहित्य
बच्चाहरूको पुस्तकहरू यो क्रिसमस दिन।
डायना Millan | | किताबहरु, धेरै
साहित्यको प्रेम तपाइँ एक बच्चा दिन सक्नुहुन्छ सबै भन्दा राम्रो उपहार हो। निस्सन्देह चाहे उनीहरूलाई यो मनपर्‍यो वा छैन तिनीहरूमा निर्भर गर्दछ। यद्यपि त्यहाँ पुस्तकहरू छन् जुन प्रत्येक बच्चाले पढ्नुपर्दछ.
आज सम्म, र भाग्यवस, त्यहाँ यति धेरै विविधता छ कि यो छनौट गर्न गाह्रो हुन सक्छ। यस पोष्टमा हामी केहि प्रस्तुत गर्दछौं कुनै पनि बच्चाको किताब पसलमा उपस्थित हुनु पर्ने आवश्यक पुस्तकहरू.
1 To देखि १ years वर्षका बच्चाहरू
2 १ देखि १ years वर्ष उमेरका बच्चाहरू:
3 १ देखि १ years वर्ष उमेरका बच्चाहरू:
4 १२ बर्ष देखि:
To देखि १ years वर्षका बच्चाहरू
साना बच्चाहरूको लागि तिनीहरूले याद गर्न सक्दैनन्:
-फोनमा कथाहरू Gianni Rodari द्वारा बनाईएको। एक अपरिहार्य क्लासिक। सायद तीन वर्ष उमेर भन्दा छ वर्षका बच्चाहरुका लागि राम्रो उपयुक्त। अनौंठो र असाधारण कथाहरू तर धेरै धेरै हास्यास्पद।
-जहाँ राक्षसहरू बस्छन् मौरिस सेन्डक द्वारा जब हामीसँग जानकारी छ। कम्तिमा पहिलो पटक ऊ एकदम राम्रोसँग खस्छ भन्ने छैन। आफ्नो रात को साहसिक माध्यम, अधिकतम दुष्ट बारे एक पाठ सिक्नेछ। बाहिर आएपछि यसको राम्रो स्वागत भएन, तर समयले सेन्डकलाई सही प्रमाणित गरेको छ। र यो एक महान पुस्तक हो।
- घिचुवा सानो क्याटरपिलर एरिक क्याल द्वारा घरका सानाका लागि सबैभन्दा सहानुभूतिशील पुस्तकहरू। यस पुस्तकको पोष्टमा पहिले नै कुरा गरिसकेको थियो सानाका लागि good राम्रो पुस्तकहरू, र यसैले हामी यहाँ आफूलाई यकिन गर्दछौं। यो क्याटरपिलर पुस्तकमा टोकरीमा जान्छ जबसम्म यो तितलीमा परिणत हुँदैन।
१ देखि १ years वर्ष उमेरका बच्चाहरू:
-Aesop's Fables। दन्त्यकथाको पुस्तक हो पर्छ (जस्तै तिनीहरू फेसनको दुनिया मा भन्नेछन्)। तपाईंले तिनीहरूलाई चिन्नुपर्दछ। तिनीहरू शायद एक कथाहरू हुन् जुन सब भन्दा धेरै पीढीबाट अर्को पुस्तामा जान्छ।
-सानो निकोलस रेने गोस्सिनी द्वारा र जीन-जैक सेम्पे द्वारा चित्रण। यो पुस्तकहरूको श्रृंखलामा पहिलो हो, स्पष्ट रूपमा सानो निकोलस र तिनका साथीहरू तारांकित। रमाईलो, सरल र वर्णहरूको साथ जुन तपाईं चाँडै मनपर्नुहुन्छ।
-एलिस वन्डरल्याण्ड मा लुइस क्यारोल द्वारा। एउटा विशेष पुस्तक। एक रमाईलो र चाखलाग्दो कथा। कुनै पनि बच्चाको कल्पना विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउने साँच्चिकै रंगीन पात्रहरू।
-अन्तहीन कथा माइकल एंडे द्वारा। यो एक यस्तो पुस्तक हो जसले हामीलाई सबैलाई आँसु झार्न लगाउँदछ, यद्यपि कल्पना र वास्तविकताको मिश्रणले यसलाई अधिक भावनात्मक बनाउँदछ। ती पुस्तकहरू मध्ये एक जुन भुल्दैन। फिल्म हेर्नु अघि यसलाई पढ्न आवश्यक छ (यद्यपि यो पहिले नै केहि पुरानो भइसक्यो)।
- मिठाई भ्याली जुम्ल्याहा फ्रान्सिन पास्कल द्वारा। किताबहरूको श्रृंखला विशेष गरी केटीहरूको लागि केन्द्रित। बिभिन्न युगहरूमा वर्गीकृत, शिशु र किशोर संस्करण छ। जुम्ल्याहा हुर्कदैछन् र उनीहरूसँग केटीहरू पनि।
-दुःस्वप्न RL Stine द्वारा। अधिक साहसीको लागि, ११-१२ बर्षका बच्चाहरूको लागि अधिक तान्न सक्छ। यहाँ बच्चाको परिपक्वतालाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ, तर कुनै श doubt्का बिना यो पुस्तकहरूको स is्ग्रह हो जुन उनीहरूलाई विधा मनपर्‍यो भने, उनीहरूले धेरै रमाउनेछन्। केही हाइलाइटहरू: "Scarecrows आधी रातमा हिंड्न", "Sinister मधुर", भयानक भ्रमण "
१२ बर्ष देखि:
- Harry Potter JK Rowling द्वारा। यस श्रृंखलामा आठ उपन्यासहरू छन्। एक फ्यान्ट्यासी विश्व जसले वयस्कहरूलाई पनि हूक गर्दछ
-ओर्सनको ईन्डर खेल स्कट कार्ड यदि तपाईं विज्ञान कल्पित प्रेमी हुनुहुन्छ भने, यो पुस्तक उत्तम छ। सबै भन्दा राम्रो ... परिणाम, निश्चित छ।
-दोस्रो मूल मेकानोस्क्रिप्ट म्यान्युएल डी पेडरोलोले रन बनाए जब हामीसँग जानकारी छ। र फेरि विज्ञान कथा। युवा दर्शकहरु संग एक हिट। पुस्तकको माध्यमबाट नायकहरूले धर्म, संस्कृति, लि ,्ग, सांस्कृतिक विविधताका बारे जान्न पाउँछन्, सबैले कुनै पनि किशोरका लागि आवश्यक पुस्तक समावेश गर्दछ।
हामी आशावादी छौं कि यस क्रिसमस दिन पोस्टले तपाईंलाई केहि सुझावहरू प्रदान गरेको छ। खुसी पढाइ!
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » धेरै » बच्चाहरूको पुस्तकहरू यो क्रिसमस दिन।
डाफे डु मौरियर उसको तीन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्लासिक्स।
जुआन डेज कानलेस, एक महान हास्य। ब्लेक्सैडबाट कोर्टो माल्टीज सम्म।